Sare & Cunto; Qaar ka mid ah Arrimaha Macaamilka ee Hawlaha Gudaha ee Google Analytics
Dhaqdhaqaaq gudaha ah waa faahfaahinta lambarka 1 ee ka dambeeya macluumaadka aasaasiga ah ee Google Analytics. Ma aha in wax laga sheego spam? Xaqiiqda dhabta ah, caruurtu waxay noqon kartaa mid si qotodheer u kala duwan, iyada oo hawsha gudaha ay dhab ahaantii adag tahay in la aqoonsado booqashooyinka dhabta ah.
Andrew Dyhan, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semef , wuxuu halkan ku soo bandhigayaa talooyin waxtar leh oo kaa caawinaya inaad maareyso hawlaha gudaha.
Waa maxay Hawsha Gudaha?
Dhaqdhaqaaqa gudaha wuxuu soo saaraa macluumaadka aad soo saartay adiga ama shakhsi kasta oo kooxda ka mid ah oo jiidaya goobta ama goobta ururku - slotland bonus code 2018. Guulahan waxay ku qoran yihiin Google Analytics sidii ay asal ahaan ka soo jeeda marti rasmi ah.
Tani waxay u horseedi kartaa waxyeello weyn, gaar ahaan sababtoo ah way adag tahay in la kala qeybiyo booqashooyinka dhabta ah oo ka yimaada shaqsiyaadka ka soo galaya goobta.
Waa maxay IP-Cinwaanka?
Cinwaanka IP waa lambar aan caadi ahayn oo kala saaraya nidaamyada, kombiyuutarada iyo qalabka kala duwan..IP-yada waxay u kala duwanyihiin 2 nooc: mid dadweyne oo adiga kuugu kala soocaya webka oo idil iyo mid gaar ah. Kala-joogga iibsashada adeega shabakada (ISP), mid ayaa laga yaabaa inuu leeyahay IP Static iyo IP-ga Dynamic. Hoostaada waxaad ka heli doontaa tilmaamaha si aad u hesho IP-gaaga caadiga ah.
Hawlgalka Gudaha ee Gudaha IP-ga ee IP-ga
Waxaa lagaaga baahan yahay in aad ku shaqeysid nidaamyada aan ahayn qalab: Haddii aad kuhesho cinwaan IP ah oo la xidhiidha nidaam, mid kasta oo ka mid ah qalabyada la xidhiidha waa la duubayaa
Markaad isticmaaleyso taleefanka gacanta si aad u tijaabiso interface-gaaga shabakada Wi-Fi: markaad isticmaalayso macluumaadkaaga webka la qaadi karo, alaab-qeybiyahaagu wuxuu kuu soo dirayaa IP kale mar kasta. Wi-Fi aad ayuu u doorbidaa marka aad tijaabineyso goob kasta adoo adeegsanaya telefoonkaaga sababtoo ah waxa uu awood u leeyahay inuu kuugu yeero hawshaada oo la adeegsanayo farsamooyinka hoosta.
Sida loo sameeyo Channel loogu talagalay Hawlaha Gudaha
Waxaad diidi kartaa hal IP ama tiro IP ah oo isku mid ah. Tani waxaa la xoojiyay baraha toosan ka dib IP kasta oo la mid ah tan.
Sidee looga fogaan karaa xadka IP-yada Google Analytics
Fursadda banaanka ah ee aad ku jirto urur ballaaran, waxaa suurtagal ah in aad la kulantid baaxadda IP-da ee xiga. Si aad u diidid inaad geliso IP-ga, waxaad samayn kartaa wade-yaal leh qoto-dheer oo horumarineed.
Kaabi qorista jaangooyooyinka lagu abuuray Sanduuqa Tusaalaha Tusaha
Si aad u tijaabiso kanaalka, raadinta meelihii laga mamnuucay ee goobta iyo in la caddeeyo hawsha, oo aan muuqanin warbixinta joogtada ah, waxay ku darsataa dabeecad ka mid ah arinta